Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Awards » Yanina Gavrilova bụ dike mbụ njem nlegharị anya nke Ukraine
Awards • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akwụkwọ akụkọ USA • WTN
A na -emeghe Hall of Heroes International Tourism Heroes site na nhọpụta naanị iji mata ndị gosipụtara ọpụrụiche pụrụ iche, ihe ọhụrụ na omume. Ndị dike njem nlegharị anya na -aga n'ihu. Yanina Gavrilova bụzi onye mbụ si Ukraine akpọrọ òkù, wee nabata ka ọ bụrụ dike njem site na World Tourism Network.
Ndị otu njem nlegharị anya ụwa matara Yanina Gavrilova isonye n'otu ndị dike nke njem.
Kemgbe 2016 Nwada Gavrilova abụrụla onye isi nke Board nke Civic Union, Associationlọ ntuziaka ndị njem nlegharị anya nke Ukraine.
Yanina Gavrilova bụ onye edemede nkuzi ọzụzụ dị anya maka ndị ọkachamara ozi, ndị njikwa, na ndị nnọchi anya United Territorial Communities n'ọhịa mmepe njem na ebe ndị njem nlegharị anya mpaghara "Mmalite ịga nke ọma na njem," ọzụzụ nkuzi nke ndị njem nlegharị anya - "Nhazi na omume nke njegharị gastronomic ”.
The "Ukrainian Tourist Guides Association" bụ na -eduga ahia n'otu na Ukraine. Kemgbe mmalite oria ojoo COVID-19, “Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na Ukraine” amụbaala ndị otu ya.
-Onye nkuzi ọzụzụ njem na ụzọ nke agụmakwụkwọ okenye, onye nkuzi nke DVV-International.
- Otu onye otu ọkachamara nke Agencylọ Ọrụ Ọchịchị maka njem nlegharị anya nke Ukraine (DART).
- Onye nnọchi anya na Ukraine nke European Federation of Tourist Guide Associations na World Federation of Tourist Guide Associations.
N'ime afọ ise gara aga, Yanina Gavrilova ewepụtala akwụkwọ ntuziaka:
- na usoro nhazi nke ebe ozi ndị njem,
- na nkwadebe ndị nduzi njem nlegharị anya na usoro nkọwa nke ihe nketa sitere n'okike, ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme.
Ọrụ ọkachamara ọzọ:
2014-2021 Yanina Gavrilova sonyere n'ọrụ ịhazi kọmitii maka ihe karịrị nzukọ ọmụmụ na nzukọ 50, nzukọ ọmụmụ, nzukọ, na nzukọ maka ndị ọkachamara-ozi, ndị njem nlegharị anya, na ndị njikwa:
- 2021 Project USAID ERA Ukraine, onye ndụmọdụ onye na -ahụ maka ozi njem nlegharị anya nke Azov;
-duziri ọzụzụ maka ndị ọkachamara nke TIC na Kyiv na 2016-2018;
- sonyere dị ka onye isi okwu na Mgbakọ mbụ nke ndị nnọchiteanya TIC na 2016 na Lviv;
-2019-2020 duziri usoro nyocha maka ndị na-ahụ maka TIC na Dnipro, Chernihiv, Kherson;
- na 2021 nwere nnọkọ maka ndị njem nlegharị anya na nguzobe TIC na Olevsk;
-2012-2013 Ọkachamara nke ọrụ EU "Ngbanwe na nkwado nke njem na Crimea";
-Ọkachamara 2010-2012 nke ọrụ ebe ozi njem nlegharị anya na ọrụ Chemonics International Inc, USAID / LINK;
- 2012. Zụlitere ma duzie ọzụzụ maka ndị ọkachamara TIC Ukraine na Estonia na Sweden.
N'ime nhọpụta enwetara nzaghachi a gụnyere: Yanina bụ onye dị ịtụnanya nke na -etinye ike ya na ume ya niile na mmepe njem. https://en.uaguides.com
E depụtara Yanina ugbu a dike.na njem ọ ga -enwekwa ohere ịbụ onye a họpụtara ka ọ bụrụ dike nke njem n'afọ. Enweghị ụgwọ.
A na -emeghe Hall of Heroes International Tourism Heroes site na nhọpụta naanị iji mata ndị gosipụtara ọpụrụiche pụrụ iche, ihe ọhụrụ, na omume. Ndị dike njem nlegharị anya na -aga n'ihu.
Afọ ma ọ bụ Pụrụ Iche Onyinye njem nlegharị anya a na -enye ya ndị a họpụtara Ụlọ Nzukọ Ndị dike njem nlegharị anya mba ofesi. Ọ bụ oghe nye ndị otu na ndị na -abụghị ndị otu Network Njem Nleta Ụwa. Ọ dịghị efu.
The Onyinye nlegharị anya kwa afọ nke onyinye afọ a na -enye ya ndị ahọpụtara Hall of International Tourism Heroes.
Ọ na -ewe ma ọ dịkarịa ala nhọpụta abụọ ka echebara echiche maka nnabata a. Otu nwere ike ịbụ nhọpụta onwe onye. Onye ọ bụla nwere ike ịhọpụta ma ọ bụ nwee ike ịhọpụta ya www.egburu.nez